Baarlamaanka Kenya oo u yeeray Wasiirkooda Arrimaha Dibadda oo Muqdisho ku soo wajahneyd
Doorashada ku celiska ee Kenya oo berri dhaceysa iyo go’aankii Maxkamadda oo dib u dhacay
Doorashada ku celiska ee Madaxweynaha Kenya ayaa berri dhici doonta, iyadoo go’aan la filayay inay soo saaraan Maxkamadda sare ee dalka Kenya oo ahaa in doorashada berri dhici doonto iyo in kale uu dib u dhac ku yimid, kaddib markii tiro ku filan oo Garsoorayaashii go’aanka gaari lahaa ay soo xaadir waayeen.
Kenya oo sheegtay in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ku dishay keymaha boni
Ciidamada Kenya ayaa sheegay in howl gal ay ka sameeyeen keymaha Boni ee gudaha Kenya ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab.
Uhuru Kenyatta oo sheegay inuu ixtiraamayo go’aanka Maxkamadda sare ee Kenya
Sagal Radio Services • News Report • September 2, 2017
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo dib doorashadiisii bishii August waxba kama jiraan laga soo qaaday ayaa ka hadlay go’aanka Maxkamadda sare, isagoo sheegay inuu ixtiraamayo.
Al-Shabaab oo afduubatay Gaari loogu ololeynayay Xisbiga Madaxweyne Uhuru Kenyatta
Gaari ay la socdeen Koox ka mid aheyd Guddiga ololaha doorashada Xisbiga Jubilee ee Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa lagu qafaashay magaalada Mandhera ee Gobolka waqooyi bari Kenya.
Musharax Doorashada dalka Kenya oo loo haysto dambi ah inuu doonayay inuu isdilo
Uhuru “Ciidanka Kenya way joogayaan Somalia ilaa Kenya ay ka noqoneyso meel amni ah”
Sagal Radio Services • News Report • May 10, 2017
Sawirro: Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo kulmay
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhiggiisa Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ku qaabilay Aqalka Madaxtooyada ee Nairobi, halkaasoo si heer sare ah loogu soo dhoweeyay
Kenya iyo QM oo ka wada hadlay xaalada amniga iyo abaarta ka jirta Soomaaliya
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres oo kulan gaar ah ku yeeshay Magaalada Nairobi ayaa waxa ay ka wada hadleen dagaalka Al-shabaab lagula jiro iyo xasilinta nabadda Soomaaliya.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Guterres oo booqasho ku tegeya dalka Kenya
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa lagu wadaa in berri oo Axad ah booqasho ku tago magaalo madaxda dalka Kenya ee Nairobi isagoo kala hadli doona hogaamiyaasha geeska Afrika arrimaha gobolka gaar ahaan abaaraha ka jira Soomaaliya iyo Koofurta Sudan.
Wasaaradda Gaashaandhigga Kenya ayaa sheegtay in illaa 57 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab ku dileen weerar qorsheysan oo shalay ka dhacay Jubadda Hoose.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ku dhowaaqday iney joojisey go’aankii horey ee dowladda dalkaasi ku xireysay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Kenya oo ka cabsi qabta in dowladda Soomaaliya mar kale joojiso Qaadka
Iyadoo saddexd bilood ay ka soo wareegatay heshiiskii dhex maray Kenya iyo Soomaaliya ee ka dhashay fasixidii Qaadkii oo dowladda Soomaaliya todobaadyo xayiraad gelisay ayaa waxaa muuqata in heshiiskaas aanu wali dhanka dowladda Kenya ka hirgelin.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay si deg deg ah u dhameystiri doonto derbiga ay ka dhisayso xadka ay la wadaagto Soomaaliya , si looga baaqsado weerarada ay geysanayaan Xarakada Al-Shabaab.
Ugu yaraan lix ruux ayaa ku geeriyootay tiro aan la shaacina waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay koox hubeysan xalay weerar ku qaadeen mid kamid ah xaafadaha magaalada Mandhera ee dalka Kenya.
Safiirka Soomaaliya ee Kenya oo booqday qeybo ka tirsan xaafada Islii (Masawiro ayaa kujira)
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya, Mudane Jamaal Maxamed Xassan ayaa xalay fiidkii hore soo booqday xaafada Soomaalidu u badan tahay ee Islii ee caasimada Nairobi Kenya.
Hay’adda Human Rights Watch oo ku eedeysay dowlada Kenya xadgudub bani’aadanimo
Warbixin ay soo saartay maanta hay’ada u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka dalka Kenya ay mas’uul ka ahaayeen weynta dad gaaraya 34 ruux oo ku noolaa gobolada Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Kenya oo sheegtay inay dishay Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab
Booliska Kenya ayaa Isniintii ka hor-tagay weerar argagixiso, iyagoo dilay mid ka mid ah kooxo qorsheynayay weeraro inay ka geystaan magaalada Kwale.
Booliska Kenya oo ka digay weeraro Al-Shabaab ka geystaan saddex magaalo
Booliska Kenya ayaa soo saaray digniin cusub oo ku aadan weeraro argagixiso ay qorsheynayaan in Al-Shabaab ka geystaan magaalooyinka ku yaal dalkaas.
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo maanta kulmaya
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta ayaa maanta oo Talaado ah ku kulmaya magaalada Nairobi ee Caasimada Kenya, iyagoo ka wada hadlaya arrinta Qaxootiga.
Kenya oo Al-Shabaab darteed ku weysay dhuun shidaal la marin lahaa dalkeeda
Sagal Radio Services • News Report • April 24, 2016
Dowladda Kenya ayaa ku guuldareysatay in dalkeeda la marsiiyo dhuun shidaal ah oo ka timaada magaalada Caruusha ee dalka Tanzania, si loo dhoofiyo, iyadoo Madaxweynayaasha dalalka bariga Afrika ay heshiis ku gaareen inay sameystaan dhuun shidaalka qaada.
Kenya: Dhalinyaro Looga Shakisanaa Argagixisonimo oo La Xiray
2 dhalinyaro ah oo kasoo jeedda xaafadda isku raranta ah ee Kibra ee magaalada Nairobi oo ku jiray liiska dadka dambiileyaasha ah ee ay booliska sida weyn u doon doonayeen ayaa isasoo dhiibay iyagoo sidoo kalena gacanta laamaha ammaanka soo galiyay hub ay isticmaalayeen.
Faah faahin: Sababihii Wafdigii Ra’iisul Wasaaraha loogu xayiray Jomo Kenyatta Air Port
Faah faahin ayaa ka soo baxaya sababihii wafdigii uu hogaaminayay Ra’iisul Wasaaraha saacado lagu xayiray garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta Air Port ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay uga sii gudbayeen dalka Turkiga.
Ciidamada Kenya oo weli baadigoobaya askar lagu waayay weerarkii Ceelcadde
Ciidamada Kenya ayaa duqeyn xoog leh oo ka imanaya diyaarado iyo madaafiicda dhulka waxa ay weli ka wadaan deegaanada ku dhowdhow tuulada Ceelcadde ee gobolka Gedo.
Kenya oo bilowday howlgal Cir iyo Dhul ay ku baadigoobeyso askarta ka maqan
Dowladda Kenya ayaa bilowday howl gal ballaaran oo ay ku baadigoobeyso askar uga luntay weerarkii jimcihii la soo dhaafay Al-Shabaab ku qaaday saldhig Ciidamada Kenya ku lahaayeen deegaanka Ceel-Cadde ee Gobolka Gedo.
Kooxo Hubeysan oo Dil iyo Dhaawac u Geystay Rakaab isaga Gooshayay Nairobi iyo Mandheera
Ugu yaraan laba ruux oo rakaab ah ayaa ku dhintay, saddex kalena way ku dhaawacmeen kaddib markii kooxo hubeysan ay ku qaadeen weerar saaka oo Isniin ah bas isaga gooshayay Magaalada Nairobi iyo degmada Mandheera ee gobolka Waqooyi-bari-Kenya.
Kenya oo soo bandhigtay sawirada iyo magacyada 11-ruux oo weeraro qorshe
Ciidamada Kenya oo sheegay in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ku dileen deegaanka Yoontoy
Sagal Radio Services • News Report • October 26, 2015
Ciidamada Kenya ayaa sheegtay in ay weerar ku qaaday deegaanka Yoontoy ee gobolka Jubbada Dhexe ay ku dishay 15 ka mid ah dagaalyahanada ururka Alshabaab ayna burburiyeen 2 doon. Afhayeenka ciidamada Kenya Col David Obonyo ayaa sheegay in subaxnimadii Axada ay weerar ku qaadeen dagaalyahano ka tirsan Alshabaab oo doonayay inay ka soo gudbaan wabiga Jubba.
Mid ka mid ah macalimiinta xeryaha qaxootiga dalka Kenya oo la afduubtay
Wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegay in dabley hubeysan ay ka afduubteen Xerada qaxooriga ee Xagardheer oo ku taal Dhadhaab, iyadoo lagu tuhunsan yahay in dadka afduubtay ay ahaayeen Alshabaab.
Shaqo joojinta Macalimiinta kenya ayaa gashay muddo bil ah, iyadoo Maxkamada sare ee dalka Kenya ay amar ku bixisay inay soo afjaraan shaqo joojinta.
Kenya oo dooneysa in Amina Mohamed ay noqoto Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay
Xukuumada Kenya ayaa dadaal ugu jirta sidii Wasiirka Arrimaha Dibada Amina Mohammed ay u noqon lahaye haweeneydii ugu horeysay ee noqoto Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay kadib markii ay dhamaato mudada uu xilka hayo Ban Ki-Moon oo ku eg dhamaadka sanadka 2016.
Madaxweynaha Kenya oo sheegay in la qaadayo xayiraada saaran Xawaaladaha Soomaalida
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in la qaadayo xayiraada saaran shirkadaha Xawaaladaha Soomaalida ee ka howl gala dalkaas, kadib markii horay Hey’addaha Ammaanka Kenya ay xanibaad ugu soo rogeen.
Shan ruux oo loo Maxkamadeynayo weerarkii Jaamacadda Gaarisa
Ilaa shan ruux ayaa Maxkamad ku taal magaalada Nairobi la soo taagay, kuwaasoo loo heysto eedeymo la xiriira inay ku lug lahaayeen weerarkii Jaamacadda Gaarisa lagu qaaday bishii April.
Booliska Kenya oo sheegay inay gacanta ku dhigeen nin Al-Shabaab ka taageerayay dhaqaalaha
Ciidamada Booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen Sarkaal Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca dhaqaalaha iyo qorista dhalinyara ku soo biiraya.
Madaxweynaha Kenya oo sheegay in aan si qasab ah dib loogu celinayn qaxootiga Soomaalida
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in aan si qasab ah dib loogu celin doonin qaxootiga Soomaalid ah ee ku nool dalka Kenya.
Sirdoonka Kenya oo sheegay in ay qabteen qof qorsheynayay in uu weeraro Baarlamaanka Kenya
Dowlada Kenya ayaa su’aalo weydiinaysa mid ka mid ah shaqaalaha xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya iyadoo loo haysto abaabulida weeraro lagu qaadi lahaa xarunta Baarlamaanka Kenya ee Nairobi sida ay xaqiijiyeen booliska dalka Kenya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya.
Xukuumadda Kenya ayaa sheegtay inaysan marnaba kala baxayn ciidamadeeda qaybta ka ah AMISOM gudaha Soomaaliya, kaddib markii ay Al-shabaab dhawaan ka dalbatay inay Kenya ciidamadeeda kala baxdo gudaha Somalia.
Kenya oo 3 bilood ah u qabatay Qaramada Midoobay inay ugaga rarto xeryaha qaxootiga Soomaalida
Dowlada Kenya ayaa ugu baaqday Qaramada Midoobay inay muddo saddex bilood ah ugaga rarto xeryaha qaxootiga ee ay dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin iyadoo ugaga jawaabaysa weerarkii dabley hubeysan ay ku galeen jaamacada Garissa.
Kenya”Weerarkii Jaamacada Gaarissa waxaa ka qeyb qaatay Ciidamo Soomaali ah”
Saraakiisha amaanka magaalada Garissa ee dalka Kenya ayaa tuhun-galinaya in ciidamo Soomaali ah oo tababar kusoo qaatay dalka Kenya in ay ku lugleeyihiin weerarada Xarakada Al-Shabab ay kageystaan dalkaasi.
Baarlamaanka Kenya oo aqbalay danjire ay Kenya u soo magacowday Somalia
Baarlamaanka dalka Kenya ayaa ogolaaday danijre ay dowladda Kenya u soo magacowday Somalia, kaasoo lagu magacaabo, Lucas Tumbo, safiirkan oo noqonaya kii ugu horreeyay oo Kenya ay u soo magacowdo tan iyo markii ay Somalia burburka gashay.
Xildhibaan ka Tirsan Baarlmaaanka Dalka Kenya oo Lagu Dhaawacay Nairobi
Xildhibaanka laga soo doorto Nyatike, Edick Anyanga ayaa waxay kooxo hubeysan xalay ku dhaawaceen gurisiisa oo ku yaalla xarunta Kenya ee Nairobi.
Afar ruux oo lagu diley magaalada mandhera dalka Kenya
Dabley hubeysan ayaa ku dishey afar ruux saddex kalana ku dhaawacay magaalada Mandhera dalka Kenya.
Kenya oo heegan gelisay Ciidamadeeda, kadib hanjabaadii Al-Shabaab
Kenya ayaa heegan gelisay ciidamadeeda, iyadoo ka cabsi qabta weeraro Al-Shabaab ka geysato gudaha dalkeeda, iyadoo ay kordhisay ciidankeeda ku sugan xuduuda Soomaaliya, kuwaasoo roondooyin sameynaya.
Garoonka caalamiga ah ee Joma Kenyatta Air Port oo saacado u xayirnaa diyaarad cilad ku timid
Garoonka diyaaradaha ee ugu mashquulka badan dalka Kenya iyo guud ahaan geeska Afrika ayaa Shalay saacado dhowr ah la xirey kadib markii diyaarad ay soo fariisatay oo xanibtay duulimaadyada.
Kenya oo baadi goobeeysa Saraakiil Shabaab ah oo Dalkeeda ku dhuumanaya
Booliska Kenya ayaa magacaabay labo ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab ee dhalasho ahaan ka soo jeeda Kenya, kuwaas oo ay ku eedeeyeen weerarradii ka dhacay Mandera ee lagu dilay 64 qof.
Koox la Rumeeysan yahay in ay Al-shabab yihiin oo Kenya ku dilay 36 Ruux
Ugu yaraan 36 ruux ayaa geeriyootay kadib markii koox latuhunsanyahay in ay katirsanyihiin Alshabab ay weerar kuqaadeen duleedka magaalada Mandera .
Kenya:Wasiirka Arrimaha Gudaha & Taliyaha Booliska oo Iscasilaya
Sida ay qorayaan Wakaaladaha iyo wargeysyada dalka Kenya ,wasiirka arimaha gudaha ee dalkaasi Kenya ee cadaadiska uu haysto iyo taliyaha ciidamada booliska ayaa lagu wadaa maanta in ay iscasilaan.
Deg Deg:- Al-shabaab oo Weerar Culus ku qaaday Kenya
Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in Al-shabaab Duleedka Magaalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi bari ay ku dileen ugu yaraan 18 Ruux oo la sheegay in ay Saarnaayeen Gaari Bus ah.
Kenya oo beenisay in la sii daayay 5-ruux oo laga afduubtay Lamu
Ku-xigeenka taliyaha Booliska Kenya Samuel Arachi,ayaa beeniyay warka sheegaya in shan nin oo afduub u geysteen Al-shabaab,sida uu sheegay todobaadkii la soo dhaafay la sii daayay.
Kenya oo xubno lagu Tirinayo inay Al-shabaab yihiin ku Wareejisay Jarmalka
Booliiska Jarmalka ayaa sheegay Axadii shalay inay dowladda Kenya ku wareejisay laba ruux oo looga shaki looga qabo inay ka tirsan yihiin Xarakada Al-shabaab ee Somalia, kuwaasoo dalka Jarmalka kasoo jeeda.
Kenya oo sheegatay inay saldhig Shabab duqeeeyeen iyo Al-Shabab oo beeniyay
Saraakiil u hadlay ciidamada Kenya ayaa sheegay in duqeyn ay diyaaradaha Kenya ka geysteen gudaha Soomaaliya ay ku bur buriyeen xero ay Xarakadda Al-Shabab ku tababari jireen dagaalamayaashooda.
In ka badan 15 oo siyaabo kala duwan loogu dilay Kenya
Ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay tiro kalana way ku dhawacmeen degaanka Nyanya oo ka tirsan magaalada Kitui ee gobolka waqooiya ee dalka Kenya, kadib markii ay halkaasi weerareen kooxo hubeysan oo aan heybtooda la garaneynin.
Kenya oo cambaareysay afgambiga Maxamed Mursi xiriirkana u jartay Masar
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa cambaareeyay afgambiga ay ciidamada Milatariga Masar ku sameeyeen madaxweyne Maxamed Mursi oo shacabka Masaarida ay si xor ah u doorteen sanad kahor.
Sagal Radio Services • News Report • May 31, 2013
MANDERA: Policeman killed, four injured after blast
Sagal Radio Services • News Report • March 20, 2013
QM oo diidday in dhaqaalle la siiyo ciidammada badda Kenya ee jooga Soomaaliya
Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa ku gacan seeyray codsi uga yimid ururka Midowga Afrika kaa oo ahaa in UN-ta ay maalgeliso ciidamada badda Kenya ee ku sugan xeebaha dalka Soomaaliya.
North Eastern Province: Deputy speaker joins race for senator seat
Deputy Speaker and Lagdera MP Farah Maalim was cleared to run for Senate in Garissa County, setting off a bruising political battle with Defence Minister and Ijara MP, Yusuf Haji.